Diintayda Iyo Qoyskayga Ayaan Difaacayay, Lacagtayda Oo Dhan Ha Qaataan, Toban Sannadoodna Hay Ganaaxaan – Feedhyahanka Khabib Oo Furka Ku Tuuray Maamulka UFC – Cadalool.com
Diintayda Iyo Qoyskayga Ayaan Difaacayay, Lacagtayda Oo Dhan Ha Qaataan, Toban Sannadoodna Hay Ganaaxaan – Feedhyahanka Khabib Oo Furka Ku Tuuray Maamulka UFC
Feedhyahanka muslimka ah ee Khabib Nurmagomedov ayaa diiday inuu ka qayb-galo dhegaysiga dacwadda go’aanka lagaga gaadhayo ganaaxa lagu riday isaga iyo McGregor kaddib rabshaddii ay sameeyeen ciyaartoodii horraanta bishii hore.
Khabib Nurmagomedov ayaa rajaynaya in marka ay fadhiistaan guddida anshaxa ee Nevada State Athletic ay ku ridaan ganaax horraanta bisha dambe ee December, hase yeeshee aanu tegi doonin halka ay ka dhacayso dacwaddiisu.
Khabib Nurmagomedov iyo Conor McGregor oo hore loogu riday ganaaxyo lagaga joojiyey ciyaaraha ayaa waxay sugayaan in go’aan kama dambays ah laga gaadho kiiskooda 10 December, waxaase hore qayb ka mid ah lacagtii uu ku guuleystay looga xayiray Khabib.
Khabib Nurmagomedov oo u warramay telefishanka beIN sports ayaa waxa uu sheegay in aanu wax khalad ah samaynin markii uu xayndaabka ka booday November 6 ee uu gacanta u qaaday asxaabta McGregor oo isagana uu wareeggii 4aad dhulka ugu tuuray, waxaanu ku dooday inuu difaacayey diintiisa Islaamka iyo qoyskiisa oo la aflgaadeeyey.
“Guddida Nevada State Athletic Commission waxay ka fadhiisanayaan wixii dhacay ciyaartii McGregor. Anigu kaliya waxa aan difaacayey qoyskayga iyo diintayda. Haddii ay doonayaan ha I ciqaabaan, waxay iga qaadan karaan lacagtii aan xoogsaday oo dhan, toban sannadoodna way i ganaaxi doonaan, laakiin dan kama lihi.” Ayuu yidhi Khabib oo kalsooni iyo iimaan badan ka muuqdo.
“Waxay igu ciqaabi doonaan inaan bilaabay, dagaalkii sharciga ahaa aniga ayaa ku guuleystay. Dagaalka kaddib waxa aan tusay (McGregor) in wixii uu dagaalka ka hor sameeyey aan layskaga tegayn.” Ayuu ku daray.
Dhinaca kale, Bob Bennett oo ah agaasimaha fulinta ee NSAC (Nevada State Athletic Commission) ayaa sheegay in laba arrimood uu kala hadlay labada feedhyahan iyo tababareyaashoodaba maalintii ka horreysay feedhkooda, isla markaana uu u sheegay inay naftooda xakameeyaan oo aanay wax rabshad ah samaynin hadalkooda kaddib iyo ciyaarta kaddib ba, hase yeeshee aanay arrintaasi fulinin.